(02) Amagumbi amatsha ahlakaniphile anepaki kunye nongqameko!
Ifulethi elitsha kwindlu yeshishini leZhK Parus, elunxwemeni lomlambo i-Uzh, kufuphi nepaki yaseBozdosh. Kufuphi kukho iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile ezithengisa ukutya, iibhiliyoni, indawo yokuzivocavoca, iAvangard Stadium, indawo yokuzonwabisa eMaximus, iPADIYUN, inkundla yaseUzhgorod. Kwimizuzu elishumi elinesihlanu uhamba ecaleni kwamanzi, zezona ndawo zikhulu zembali nenkcubeko, i-Independence Embankment, i-lame alley enkulu yaseYurophu, eyona mithi midala ye-sakura esixekweni. Ifulethi linayo yonke into oyifunayo ngokuhlala ixesha elide nelifutshane.
Entsha, umyili, indlu eqaqambileyo, ejongene noMlambo wase-Uzh kunye ne-Bozdosh Park, kwisakhiwo esitsha seshishini le-ZhK Parus. Kufuphi nendlu kukho iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile zokutya, iibhiliyoni, indawo yokuzivocavoca, i-Avangard Stadium, i-complex complex Maximus, i-PADIYUN (iNdlu yoBuntwana kunye noLutsha), iNkundla ye-Interdistrict yase-Uzhgorod. Imizuzu elishumi elinesihlanu uhamba nge-promenade, iindawo ezinkulu zembali kunye nezenkcubeko, i-Independence Embankment, i-alley ye-lime enkulu yaseYurophu, imithi ye-sakura endala kwisixeko, isixeko kunye neMasaryk Square ... Ifulethi inakho yonke into oyifunayo ixesha elide nelifutshane:
-ibhedi ephindwe kabini kunye ne-orthopedic mattress, ilinen yelinen, iitawuli;
-i-sofa yamathambo ephindwe kabini, ilinen yelinen, iitawuli;
-zonke izixhobo eziyimfuneko: i-flat screen TV, ifriji, umatshini wokuhlamba, i-microwave, iketile yombane, isomisi seenwele, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina;
-i-intanethi ekhawulezayo (i-WI-FI);
-indlu ine, ixhotyiswe kwaye ixhotyiswe ngayo yonke into efunekayo ekuphekeni nasekusetyenzisweni, ikhitshi (izixhobo kunye nempahla, ityuwa, ipepper, iswekile);
-igumbi lokuhlambela: ishawa, isitya sokuhlamba, indlu yangasese, i-towel rail efudumeleyo, isomisi seenwele;
- isepha, ishampu, ijeli yeshawa, i-slippers.
Ukuba kuyimfuneko, zonke iintsuku ezi-7, inkonzo yokucoca indlu yamahhala inikezelwa.
Kukho ukulungiswa koqhagamshelwano. Sazisa iindwendwe kwangaphambili ngeekhowudi ezivela kwiinqaba kwaye ziyakwazi ukuzinza ngokwazo.
Indawo yokuhlala iphantsi kokhuseleko lwe-arhente yezokhuseleko i-SBM.
Entsha, umyili, indlu eqaqambileyo kwisakhiwo esitsha soshishino lwe-LCD Parus. Indawo ezolileyo kakhulu kufutshane nepaki. Indlu ibekwe elunxwemeni lomlambo i-Uzh, kufuphi nebhulorho yokumiswa ekhokelela eBozdosh Park. Kufuphi nendlu kukho iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile zokutya, iibhiliyoni, indawo yokuzivocavoca, i-Avangard Stadium, i-complex complex Maximus, i-PADIYUN (iNdlu yoBuntwana kunye noLutsha), iNkundla ye-Interdistrict yase-Uzhgorod. Imizuzu elishumi elinesihlanu uhamba nge-promenade, iindawo ezinkulu zembali kunye nenkcubeko, i-Independence Embankment, i-lame alley enkulu yaseYurophu, imithi ye-sakura endala kunazo zonke kwisixeko, izixeko kunye neMasaryk Square ... Ifulethi inakho yonke into oyifunayo ixesha elide nelifutshane.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwethu, sinxibelelana neendwendwe zethu kwaye sibanike inkxaso yolwazi oluyimfuneko